समता माइक्रोफाइनान्सको निक्षेप सङ्कलनमा ९०% वृद्धि | गृहपृष्ठ
Home लगानी समता माइक्रोफाइनान्सको निक्षेप सङ्कलनमा ९०% वृद्धि
on: August 03, 2018 लगानी
समता माइक्रोफाइनान्सको निक्षेप सङ्कलनमा ९०% वृद्धि
साउन १८, काठमाडौं (अस) । गत आवको चौंथो त्रैमासमा समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलनमा ९० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । सो समयमा कम्पनीले रू. २५ करोड ९० लाख ९५ हजार निक्षेप सङ्कलन गरेको छ । अघिल्लो आवको चौंथो त्रैमासमा कम्पनीले रू. १३ करोड ५७ लाख १५ हजार निक्षेप सङ्कलन गरेको थियो । गत आवको चौंथो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ७३ लाख ८५ हजार खुद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आवको चौंथो त्रैमासमा कम्पनीले रू. १ करोड ४० लाख ५३ हजार खुद नाफा कमाएको थियो ।
कम्पनीको चुक्तापूँजी २० प्रतिशत बढ्दै रू. ३ करोड ७९ लाख २० हजार पुगेको छ । जगेडा कोषमा रू. २ करोड १८ लाख ३६ हजार रहेको कम्पनीले रू. ५ लाख लगानी गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा रू. ५२ लाख ६९ हजार रहेको छ भने खुद ब्याज आम्दानी रू. ३ करोड ९५ लाख ६५ हजार रहेको छ । गत आवको चौंथो त्रैमासमा कम्पनीको कर्जा प्रवाहमा ८४ प्रतिशत वृद्धि भएकोे छ । सो समयमा कम्पनीले रू. ६९ करोड ८३ लाख ७० हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
साथै, कम्पनीले सम्भावित जोखिमका लागि रू. ८३ लाख ५९ हजार छुट्याएको छ । अघिल्लो आवको चौंथो त्रैमासको तुलनामा गत आवको सो समयमा ५ गुणा बढी खराब कर्जा उठाउन कम्पनी व्यवस्थापन सफल भएको छ । कम्पनीले रू. ६३ लाख ३६ हजार खराब कर्जा उठाएको छ । कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव २ प्रतिशत, प्रति शेयर आम्दानी (वार्षिक) रू. १९ दशमलव ४८ र तरलता अनुपात ८ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ ।
समता माइक्रोफाइनान्सको हकप्रद शेयर हितग्राही खातामा जम्मा
समता माइक्रोफाइनान्सको कम्पनी सचिवमा निरौला
समता माइक्रोफाइनान्सद्वारा प्रस्तावित लाभांश समायोजन
समता माइक्रोफाइनान्सको हकप्रद शेयर सूचिकृत